मनाङको चामे गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका घले निर्वाचित
मनाङको चामे गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घले निर्वाचित भएका छन् । यसअघि पनि उनी अध्यक्ष थिए ।
सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको हिमाली जिल्ला मनाङमा स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित अध्यक्षले शपथ लिएका छन् । चार गाउँपालिका रहेको मनाङमा उक्त निर्वाचनमा मिश्रित नतिजा आएको थियो । दुई पालिकामा नेकपा (एमाले) तथा दुई पालिकामा नेपाली कांगे्रसले जित हासिल गरेका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घले र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले …
NepalJapan7दिन पहिले
एमालेले जितेको यी हुन् ११४ पालिका (सूचीसहित)
काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । बुधबार बिहानसम्म ३८६ पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमध्ये नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ । एमालेले हालसम्म ११४ पालिका जितेको छ । नेकपा एमाले विजयी भएका पालिकाहरू मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका: अध्यक्ष कान्छा घले मनाङको चामे गाउँपालिक...
ekagaj 8 दिन पहिले
कहाँ-कहाँको जित्यो एमालेले ६७ पालिका ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजेसम्म २३९ पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमध्ये नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ । एमालेले हालसम्म ६७ पालिकाको प्रमुख जितेको छ । एमालेले जितेको पालिकाहरू - मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका: अध्यक्ष कान्छा घले - मनाङको चामे गाउँपाल...
कति पालिका जित्यो एमालेले ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ- हालसम्म ३२ वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार नेकपा एमालेले १३ वटा पालिका जितेको छ । नेकपा एमाले जितेको पालिकाहरू - मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका: अध्यक्ष कान्छा घले - मनाङको चामे गाउँपालिका: अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घले - मुस्ताङको घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका: अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्ट - म...
ekagaj 11 दिन पहिले
स्थानीय तह निर्वाचन : एमालेले मनाङले टुंग्यायो उम्मेदवार
लमजुङ – नेकपा (एमाले) ले मनाङमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार टुंग्याएको छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एमालेले जिल्लामा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवार टुंग्याएको हो । एमालेले मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्षमा कान्छा घलेलाई दोहोर्‍याउने भएको छ । उपाध्यक्षमा छिरिङ धावा गुरुङले टिकट पाएका छन् । चामे गाउँपालिकामा पनि […]
एमालेले मनाङमा उम्मेदवार टुंग्यायाे
नेकपा (एमाले) ले मनाङमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार टुंग्याएको छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एमालेले जिल्लामा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवार टुंग्याएको हो । एमालेले मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्षमा कान्छा घलेलाई दोहोर्‍याउने भएकाे छ । उपाध्यक्षमा छिरिङ धावा गुरुङले टिकट पाएका छन् । चामे गाउँपालिकामा पनि लोकेन्द्र घले नै अध्यक्षमा दोहोरिने भएका छन् । उपाध्यक्षमा आशकुमारी गुरुङ, नासों गाउँपालिका अध्यक्षमा मनबहादुर गुरुङ र उपाध्यक्
मनाङका बाढी प्रभावितलाई एनएमबी बैंकको राहत
काठमाडौं (अस) । एनएमबी बैंकले मनाङ जिल्लाका बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण गरेको छ । बैंकले मिनरल वाटर, स्यानिटाइजर र मास्क वितरण गरेको हो । बैंकको मनाङ शाखा प्रमुख लभ गुरुङको संयोजकत्वमा कर्मचारी, चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घले, चामे– ५ का अध्यक्ष कैले गुरुङ तथा स्थानीय समुदायको उपस्थितिमा सहयोग सामग्री सामग्री वितरण गरिएको थियो । लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले अलपत्र भएका तीन नाबालकसहित ५ जनालाई राहत वितरणमा गएको टोलीले हेलिकोप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाएको छ । उद्दार गरिएकामा ६५ वर्षीय बुद्घराम गुरुङ, ९ वर्षीय जोह्न गुरुङ, ७ वर्षीया आरध्या गुरुङ, ८ वर्षीया जेनिप गुरुङ र वर्ष २७ वर्षीया लक्ष्मी गुरुङ रहेको बैंकले बताएको छ ।
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । माथिल्लो मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकास्थित हुम्डे एयरपोर्ट क्षेत्रको केही माथि चामे लगायतको क्षेत्रमा मस्र्याङ्दी थुनिएको छ । चामे क्षेत्रमा मस्र्याङ्दी नदीमा पानीको सतह बढेसँगै माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोका कारण सडकहरु भासिँदै गएको हो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेका अनुसार हुम्देब एयरपोर्ट माथिल्लो क्षेत्रमा सडक जोखिममा परेको छ । माथिल्लो […]